Ma Linn Zar Nwe
အသားအရေကို ချက်ချင်းဖြူဝင်းစေပြီး အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ cream အရေးအကြောင်းများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေတဲ့ cream အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို တားဆီးပေးတဲ့ cream
Ko Bo Win
အိုမင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းစက်များ ဖယ်ရှားပေးမယ့် Snail Wish Whitening Cream 🐌 Snail Wish Whitening Cream မှာ ပါဝင်တဲ့ Antioxidants က အစွမ်းထက်ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါဝင်တာကြောင့် အရေပြားအိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပြီး အမည်းကွက်၊ အမည်းစက်များ၊ ဝက်ခြံအမာရွတ်များကို ထိရောက်စွာဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ အရေပြားဆဲလ်များ အသစ်ဖြစ်ပေါ်ခြင်းကို အားပေးပြီး နုပျို၊ ဝင်းပ၊ တင်းရင်းစေပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများပါ နေ့ညအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Snail Whitening Cream (50 g) တစ်ဘူး - ၂၉,၅၀၀ ကျပ်
Ma Aye Myat Mon
Snail Wish 1ဗူး 29500Ks
Snail Wish Whitening Cream ရဲ့3Months Target Trip က Pattaya တဲ့နော် 🤩 2020 September မှ November3လအတွင်း Snail Wish Whitening Cream ဘူး ၁,၀၀၀ ရောင်းချသူတိုင်း ထိုင်းနိုင်ငံ ပတ္တရားကမ်းခြေ ခရီးစဉ် သွားရောက်ခွင့် လက်မှတ် တစ်စောင်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Agent တစ်ယောက်ကို လက်မှတ်ဘယ်နှစောင် အရယူကြမလဲ? Agent တိုင်းရဲ့ စွမ်းအားရင် ယုံကြည်ပြီးတော့ ပတ္တရားခရီးစဉ်မှ စောင့်မျှော်နေပါတယ် 😗
Chan Myae Kyi
Snail Wish Whitening Cream မှာ အသားအရေကို ထိခိုက်ပျက်စီးစေတဲ့ 🚫 Paraben 🚫 Mineral Oil 🚫 Benzophenone 🚫 Alcohol 🚫 Phenoxyethanol 🚫 Synthetic perfume 🚫 Steroid ….. များ လုံးဝ(လုံးဝ) မပါဝင်ပါဘူး မြန်မာနိုင်ငံ FDA မှ FDA No. MN190822680 ဖြင့် စစ်ဆေးခွင့်ပြုချက်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့် စိတ်ချယုံကြည်စွာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Ma NweThanda Oo
Glow Skin လေးရဖို့ Snail Wish Whitening Cream ရှိတယ်ဆိုတာ မမေ့နဲ့နော် 🐌 တစ်မျိုးထဲ လိမ်းထားရင်တောင် ပြည့်စုံတဲ့ အလှတရားကို ရရှိနိုင်တယ်နော် Primer အနေနဲ့လိမ်းထားရင်လည်း မိတ်ကပ်တစ်နေကုန်ခံပြီး ကြည်လင်ဝင်းပနေမှာပါ။ မိတ်ကပ်ကြောင့် အသားအရေ ပျက်စီးမှုကိုလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။